Wafti ka socda dalka Turkiga oo soo gaadhey magaaladda Boosaaso. – Radio Daljir
Wafti ka socda dalka Turkiga oo soo gaadhey magaaladda Boosaaso.
Seteembar 29, 2012 12:59 g 0
Boosaaso Sept 29-Wafti ballaaran oo ka socda dalka Turkiga ayaa soo gaarey magaaladda Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ahna magaalo ganacsiyeedka Puntland.
Masuuliyiin ka socda maamulka Puntland oo uu hogaaminayo Wasiirka Caafimaadka Dr Cali Cabdilaahi Warsame, oo ay weheliyaan ?gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Maxamed Galan, iyo Duqa degmada Boosaaso Xasan Cabdalle Xasan ayaa kusoo dhoweeyey garoonka Diyaaradaha ee Bander Qaasim Airport International ee magaaladda Boosaaso.
Xubnaha u dhashay dalka Turkiga ee maanta soo gaarey magaalada Boosaaso, ayaa ka socda hay’ad wadanka Turkiga u qaabilsan dhanka iskaashiga Caalamiga ah, waxaana imaatinkooda Puntland lagu sheegay mashaariic ay ka fulinayaan gudaha Puntland oo ay hore ugu balan qaadeen.
Kadib markii waftigani kasoo degeen Garoonka Diyaaradaha ee magaalada Boosaaso,ayaa gudaha garoonka waxaa lagu qabtay munaasibad isbarasho ah taasoo ay isku barteen Masuuliyiinta dawlada Puntland iyo Waftiga Turkish ka ah.
Dr Cali Cabdilaahi Warsame Wasiirka Wasaarada Caafimaadka Puntland oo ka hadlay munaasibadaasi, ayaa siweyn u soo dhoweeyey waftiga Turkiga isagoo dawlada Turk uga mahadceliyey taageerada ay la garabtaagan tahay Somalia.
Sidoo kale Afhayeen u hadlay waftiga Turkiga ka socdey oo magaciisa kusoo koobay Saadiq ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay soo dhoweynta qiimaha badan ee loogu sameeyey magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari wuxuuna sheegay in ay mashaariic ka bilaabi doonaan deegaanadda Puntland.
Dawlada Turkiga ayaa mudooyinkii danbe mashaariic horumarineed ka wadey dalka Somalia gaar ahaana magaalada Muqdisho, waxaana hada mashaariic kuwaas la mid ah ay ka bilaabaysaa deegaanada Puntland.
Madaxweynaha Somalia oo tegey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Ku-Simaha Ra?iisul Wasaaraha Oo Ka Hadlay Xaalada Magaalada Baladweyn iyo Kismaayo